Tafintohina Tamin’ny Dokambarotra Milina Fanasan-damba Mampiseho Herisetra An-tokantrano Ireo Pakistaney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2017 15:36 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, polski, Français, Español, русский, Português, English
Lahatsary mbola avy amin'ny dokambarotra tafaporitsaka ihany izay manasongadina ny herisetra an-tokantrano
Nampisafoaka tao Pakistana ny dokambarotra tafaporitsaka iray nivezivezy tao amin'ny media sosialy noho ny fihetsika manao tsinontsinona ny herisetra an-tokantrano, ary nanery ny orinasa elektronika ao ambadiky ny lahatsary mba hiala tsiny.
Mampiseho vondrona ankizilahy mpinamana nihomehy ilay mpilalao fototra momba ny adiny tamin'ny vadiny ny dokambarotra raha nampiroborobo ny milina fanasan-damba marika Kenwood. Nirehareha tsy handefitra tamin'ny “fihetsiky” ny vadiny ilay lehilahy , ary nampiasa ny “dhulayi,” izay midika ara-bakiteny hoe “manasa” kanefa ampiasaina amin'ny tenin-jatovo hoe “midaroka.”
Tsy mbola nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny dokambarotra, fa ny vondrona Facebook antsoina hoe “Whatsapp Videos” no namoaka ilay lahatsary tafaporitsaka ary tsy ela akory dia efa nanomboka ny tsikera. Hoy ilay mpisera Facebook Wafa Zafar momba izany hoe:
Maharikoriko ilay dokambarotra … .toa milaza izany fa tokony hirehareha amin'ny namany ny lehilahy amin'ny famonoana ny vadiny
Manome ny antsipirihany tamin'ny fitarainana nalefa ho an'ny foiben'ny orinasa any Etazonia ny fanehoan-kevitra iray hafa avy amin'ilay mpisera Facebook Kookie Malik :
Nanao ezaka aho hiresahana tamin'ny Kenwood any Etazonia sy Kenwood any Japana ary nametraka fanontaniana tsotra iray: Nahoana no METY ny mampiasa ny fandrisihana herisetra ratsy toy izany, izay mitarika amin'ny zavatra tsy misy fotony mba hahazoana vola sy hampiroborobo ny orinasanareo na ny marikareo ?? Matahotra ny vehivavy eto aminay sy ireo vehivavy REHETRA voakasik'izany ary ianareo rehetra izay mahita izany ho mampihomehy dia tokony hieritreritra ny lehilahy mamono ny reninareo, ny anabavinareo na ny zanakareo vavy … dia mihomehy ianareo ary mieritreritra fa METY izany. Henatra ho an'ny Kenwood sy ny Mpitantana azy izay namela izany hitranga, fahadalana iray hafa ihany koa ny tsy fandraisana andraikitra ary mandoto ny zavatra tsy misy dikany nataon'ny orinasa toy izany izay nasehon'ny Delta Airlines vao haingana. Tsy mbola tapitra ihany izany.
Nanoratra i Hurmat Riaz avy any Mangobaaz, izay namaritra ny tenany ho tranonkala mpampiala voly ho an'ny Pakistaney taona arivo fa ity dokambarotra ity no farany indrindra tamin'ny andiany novokarin'ny orinasa izay mampiseho lehilahy voatsindrin'ny vadiny;
Ny herisetra an-tokantrano, na ny vehivavy na ny lehilahy no lasibatra dia zavatra tsy tokony hovazivaziana. Tena olana lehibe izany, olana iray izay atrehan'ny olona maro ao Pakistan sy any an-kafa. Tsy vitan'ny hoe mahatonga azy ireo ho mafy fo ny zavatra tahaka itony fa lasa mamelona hatrany ilay hevitra fa tsy maninona ny mivazivazy momba ny fidaroham-bady sy ny mampihatra izany .
Nitatitra tranga-na herisetra an-tokantrano miisa 1.843 tao Pakistan teo anelanelan'ny taona 2004 sy taona 2016 ny vaomieran'ny zon'olombelona ao Pakistan. Tsy tafiditra ao anatin'izany ireo ohatra amin'ny herisetra hafa toy ny famonoana olona manankaja, fakàna an-keriny, fanolanana sy ny fanafihana amin'ny asidra. Maneho fotsiny ny isan'ny tranga voatatitra ny tarehimarika, izay lasa ambany lavitra noho ny tena isan'ny tranga tena nisy.
Efa niala tsiny noho ny dokambarotra tafaporitsaka ny orinasa ary niaiky fa “tsy lavorary ny fitsarana” [nataon-dry zareo] ka nangatahany “ny pejin'ny media sosialy rehetra hanala ity dokambarotra ity satria tsy mbola navoaka tamin'ny fomba ofisialy izany na nahazo fankatoavana avy amin'ny Kenwood.” Na izany aza, rehefa voateny sy tontosa izany rehetra izany, mazava tsara izao ny hafatry ny hatezerana tamin'ilay dokambarotra tafaporitsaka fa tsy maintsy mitandrina ny orinasa raha toa ka mikasa ny hampiasa ny fankahalana vehivavy rehefa mivarotra ny vokatra avy any amin-dry zareo.